४० लाख जनसङ्ख्या भएकाे सहरमा फेरि लकडाउन ! कारण निकै डरलाग्दो । – Online Khabar 24
पहिले खबर नेपालको कोरोनाको, पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ६६ जनामा को’रोना भाइरसकाे स’ङ्क्र’मण पुष्टि भएको छ ।
पीसी’आर विधिबाट गरेको परीक्षणमा पाँच सय ६९ जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा ९७ जनामा स’ङ्क्र’मण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गएको २४ घण्टामा १२ हजार २० जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षण गरिएकामध्ये पाँच दशमलव ५४ प्रतिशतमा स’ङ्क्र’मण पुष्टि भएको हो ।
आज थपिएका सहित नेपालमा कोरो’ना स’ङ्क्र’मण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या नौ लाख चार हजार पाँच सय १३ जना पुगेको छ । जसमध्ये आठ लाख १० हजार दुई सय ९८ जनामा पीसी’आर विधि र ९४ हजार दुई सय १५ जनामा एन्टिजेन विधिको प’रीक्षणमा स’ङ्क्र’मण पुष्टि भएको हो ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय २२ जना निको भएसँगै कोरोना सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या सात लाख ८८ हजार ६ सय ३० पुगेको छ ।
यही अवधिमा ११ जना स’ङ्क्रमितकाे ज्या’न गएकाे छ । यो सहित नेपालमा को’रोनाका कारण ज्या’न गुमाउ’नेको सङ्ख्या ११ हजार तीन सय ७२ पुगेको छ ।अहिले नेपालमा १० हजार दुई सय ९६ जना स’क्रिय स’ङ्क्रमित रहेका छन् । सक्रिय स’ङ्क्र मितमध्ये दुई सय ५२ जनाको आई’सीयू र ८० जनाको भे’न्टिले’टरमा उप’चार भइरहेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ७३ हजार चार सय २७ जनाले को’रोनाविरु’द्धको खो’प लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ । यो पनि चीनमा ४० लाख जनसङ्ख्या भएको एक सहरमा आज मङ्गलवारदेखि पूर्णरूपमा लकडाउन लागू गरिएको छ । सहरमा को’रोना बढ्दो स’ङ्क्र’मणपछि यो कदम उठाइएको हो । मानिसहरूलाई अति आवश्यक पर्दा मात्र बाहिर निस्किन भनिएको छ ।
यद्यपि चीनमा कोरोना स’ङ्क्र’ण दर निकै कम छ तर गांसु प्रान्तको राजधानी लानजुमा लकडाउन लागू गरिएको हो । हिजो सोमवार चीनमा २९ जनामा को’रोना स’ङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा लानजुमा मात्र ६ जनामा स’ङ्क्रमण देखिएको थियो ।
यसअघि पनि उत्तरी चीनमा हजारौँ मानिसहरूलाई घरमै रहन क’डा आदेश दिइसकिएको छ । चीनमा को’रोनाको अहिलेको स’ङ्क्रमण डे’ल्टा भे’रिएन्टसँग जोडेर हेरिएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षण दर बढेसँगै स’ङ्क्रमित हुने मानिसको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ । यो खबर उज्यालो अनलाइन बाट साभार गरियको हो ।
Prevयी कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिन्छन् महिलाहरू !
nextविदेश गएर कमाउने आसमा आफ्नैबाट धोका पाए, अनि…..